ရဲမင်းလတ် - ရဲမင်းလတ် ဒုတိယ နေရာ
Acrylic on canvas 18" x 24" - မိုးပျံငှက်
Don’t Feel Anything Extremely
Ms Agnes & Philip - Hello, I am Ms Agnes Martin, 22 years old girl and my junior brother is Philip Martin 20 years old boy we are from Cote d'Ivoire,we are the children of...
How to Setup DHCP Reply on Cisco Switch - How to Setup DHCP Reply on Cisco Switch ============================== 1-Create VLAN VLAN-10=SERVER VLAN-20=IT VLAN-30=HR VLAN-40=Accounting ==============...
MGLUAYE vs BLOGGING - အယင်တုံးက မောင်လူအေး ဘလော့ရေးတယ်ဗျ။ သူများနိုင်ငံ နေစဉ်တုံးက အလုပ်က ပြန်လာရင် အိမ်မှာ ဘာမှ လုပ်စရာကလည်း မရှိပြန်၊ ကိုယ်တိုင် တည်ထောင်ထားတဲ့မိသားစုကလည်း မရ...
အပြစ်များနဲ့တောင်ပံ - ကလေးဘဝပေါ့ကွယ် မင်းအမေကို ပြန်မေး ကျေနပ်တဲ့အဖြေနဲ့ မင်းရဲ့ဘဝ ခန္ဓာအပ်တာ ထက် ဘာမှ မပိုလို့ ငါဆိုရင် ရက်စက်တယ်ပြောမယ် ။ ဒီခေတ်အခါ မေတ္တာကရှား ဘဝ အာမခံချက်ဆိုတာ အ...
At the end of the road. - some came onto the track Shivering with fear but in the face they seem very much ready Just likeareal athlete some for all their crimes they put on the m...
EAOs ကိုယ်စား KNU ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမူတူးစေဖိုး၏ အဖွင့်မိန့်ခွန်း -
Chan Mya Soe - Myanmar Blogger
9 Lokasi Taman yang Wajib Dikunjungi di Kota Malang - *WisataMalang.co* - Tak kalah dari kota-kota besar seperti Jakarta atau Bandung, kota Malang juga memiliki taman yang disediakan untuk tempat hiburan para ...
ЗЕМЛЯ НИМА ( NEEM LAND Travels & Tours company Ltd ) - *Программа Путешествия (5 days sightseeing and5days at the Famous beach Ngapali in Myanmar)* *DD/MM/YY ( ......../........)* *Вы прилетите 25 окт в 2...
ရွှေနွယ်ပင်(ဆေးရွှေနွယ်) - https://www.facebook.com/pyaung.pyan/posts/477468119108203?pnref=story https://www.facebook.com/pyaung.pyan Warazein Min
မိန်းကလေး :) - အမျိုးသမီးတို့၏ ရီစရာကောင်းသော -------------------------------------- အလေ့ အထများ ------------------- ၁။ ကျွန်မတို့တွေက နိုးစက်ကိုလိုတာထက် (၁၀) မိနစ်ကြိုပေး...
ခွယ်ကဘောင်ပညာဥယျာဉ်ကျောင်း၏ Running Activities လက်ရှိလုပ်ဆောင်ချက်များ - ဇွဲကပင် (ခွယ်ကဘောင်) ပညာဒါနအသင်း တည်ဆောက်ထားသော ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့၊ ဇွဲကပင်ကုန်း၊ ခွယ်ကဘောင် ပညာဥယျာဉ်ကျောင်း၏ Running Activities လက်ရှိလုပ်ဆောင်ချက်မျ...
ကတိတွေ ထပ်ကာပေး - ကျွန်တော့် ရဲ့ ချစ်ခင်လေးစားရပါသော တားရော့ဝါသနာရှင် အပေါင်းတို့ကို များမကြာမှီ ရက်ပိုင်း အတွင်းမှာ တားရော့ ကတ်၁ကတ်တည်း နဲ့ လူတဦး ကို အကြောငး အရာ စုံလင်အော...
About my hohodidi
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် - ကျေး ဇူး တင် ပါ တယ် ငါးလုံးထဲရယ်ပါ ကြားဘူးတဲ့လူများနိုင်ပေမဲ့ ပြောဘူးတဲ့လူကတော့ လက်ချိုးရေလို့ရလောက်အောင်တောင်နည်းမလားပဲနော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ခြ...
- အတိတ် ဒီဘ၀တော့ ဒီမျှနဲ့ပဲကျေနပ်တယ်လို့ နှုတ်ခမ်းနဲ့ရင်ဘတ်ကထွက်ကျ ငါ့မျက်နှာစာမှာတည်လာတဲ့သန္ဓေ။ ။ အရှုံးလား အမှားလား ဝေေ၀ ၀ါးဝါး “ဆယ့်ခွန်”နှစ်တွေ အကြ...
အာမခံ ကုန်မနီ ပိုင်ရှင်နှင့် စကားပြောခြင်း - သစ်ရွက်တွေအရောင်ပြောင်းကြပြီ ဒါ...ရာသီသစ်တခုရဲ့လက်ချက်ပဲ။ အငွေ့ ထောင်းထောင်းထ အသီးအရွက်ဟင်းချိုတခွက် ဆင်ဂယ်မော့လ်တ် စကော့ခ်ျတစ်ပုလင်း အမေရိကန်စပီးရစ် စီးက...
အနီရောင် နှင်းဆီ အိပ်မက်
ရာဘာဖိနပ်တစ်ရံ - ဂျပန်ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်တွဲ မှာပါတဲ့ အခန်းလေးတစ်ခန်းပါ ဖိနပ်ချုပ်တဲ့ဆရာက ဖိနပ်ချုပ်တယ်.. ခြေထောက်ကို မြင်ရုံနဲ့ ဖိနပ် နံပါတ်သိတဲ့အထိ သဘာရင့် ဖိနပ်ချုပ်ဆရာကြီးတစ...
ရဲဘော် ၇ ယောက်
လက္ခဏာပညာရပ် ဗဟုသုတ (အပိုင်း-၁) - ဥာဏ်လမ်းကြောင်း အဖျား အပေါ်ဘက်သို့ ကော့ တက် သွားခြင်း ဥာဏ်လမ်းကြောင်းရဲ့ အဖျားဘက်ဟာ ပုံပါ အတိုင်း အပေါ်ဘက်ကို ကော့တက် နေမယ်ဆိုရင်....။ ဒီလက္ခဏာပိုင်ရှင်ဟာ...
how about you think nice or not? - hand made from our family Hand Made from Our family
(၆၂)နှစ်တာ ကာလအတွင်း တိပိဋကဓရ ၊ တိပိဋကကောဝိဒ သာသနာ့အာဇာနည်(၁၂)ပါး - (၆၂)ကြိမ်မြောက် တိပိဋကဓရ ၊ တိပိဋကကောဝိဒ ချီးကျူးပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား၌ နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ အကျိုးတော်ဆောင် မန္တလေးမြို့ ဗန်းမော်ကျောင်းတိုက...
လက်တွေ့နည်းကျ အောင်မြင်ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ စွာ နေထိုင်နည်း ပညာ (၈) - *၂။ စောင့်ဆိုင်းခြင်း (WAITING FOR THINGS)* ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ချိန် မဟုတ် တစ်ချိန်၌ ကိစ္စ တစ်ခုခုကို စောင့်ဆိုင်းဖူးကြပေမည်။ ချိန်းဆိုထားသူ တစ်ဦး ရောက...
မင်္ဂလာပါ ဘလော့ဂါ - ဘလော့ဂ်ဆိုတာကို မရောက်တာကြာခဲ့ပြီပဲ။ အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုး၊ ခံစားချက် အလီလီနဲ့ စာတစ်ပိုဒ်ကိုတောင် အစအဆုံး မတွေးနိုင် မရေးနိုင်တော့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ စတေးတပ်...
သူငယ်ချင်း........သို့ ......... - အဝေးရောက် သူငယ်ချင်းဆီ မေးအရောက် မပို့ ဖြစ်ခဲ့ သည်မှာ နှစ်တွေကြာခဲ့ လို့ လတွေတောင် တိုးနေပြီလေ။ ဘာလိုလိုနဲ့လိုနေခဲ့ တာ သူ့ လိပ်စာလေး အခုဆို အဆင်သင့် က...
blog Idol အလိုရှိသည် - လိုအပ်သော အရည်အချင်း ။ ။ သဏ္ဍန်လုပ် သရုပ်တူအောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ရမည် အရည်အချင်း ပြည့်ဝသူ သာ ဘလော့ အိုင်ဒေါ အဖြစ်ရွေးချယ်မည် ပုံ ဂျေ ဘလော့အိုင်ဒေါ .... ...
Check out http://regularguyz.blogspot.com/ - Comming soon. Check out this new site - http://regularguyz.blogspot.com/.
CHELSEA AND VILLAS-BOAS PART COMPANY - Andre Villas-Boas has parted company with Chelsea Football Club today. The board would like to record our gratitude for his work and express our disappoint...
ဆရာ ချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ) ရေးသားသော ဘယ်လိုအမေလဲ ဆောင်းပါးအား ဆက်လက်တွေးတောခြင်း - ဆရာချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ) ရေးသားသော ဘယ်လိုအမေလဲ ဆောင်းပါးမှ ကောက်နှုတ်ချက်အချို့ကို အရင်ဖော်ပြပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ သတိရတာတစ်ခုကတော့ သီချင်းရေးစ နှစ်နှစ်လောက်မှာ စံပ...
`အမည်နာမနဲ့ အပိုင်းအစများကြား´ - ခါးသီးတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေဟာ လူတယောက်ဆီမှာ ... တိုးတိတ်စွာ မာကျောနေလေရဲ့။ နံရံပေါ်က ပြက္ခဒိန်ဟောင်းများ တရွက်ပြီးတရွက် တခုပြီးတခု ခုန်ဆင်းသွားကြပြီးတဲ့နောက် ... ...
သားကောင်ခြေရာ - *image source: http://www.englishexercises.org* မည်းမှောင်နေတဲ့ ထင်းရူးတောတန်းနှစ်ခုက ချောင်းရဲ့ တစ်ဖက်တစ်ချက်ကနေ မျက်မှောင်ကုတ်ကြည့်နေသလို ထင်ရသည်။ လေတို...
2D-09: Basic Modifying Commands (Erase, Copy, Move) - ကျနော် ရှေ့မှာ Basic Drawing Commands, Display Control, Selection Methods, Object Snaps တွေ ပြောထားပြီးပါပြီ။ ဒီတော့ Modify လုပ်တဲ့ Commands တွေ “စ” ပြော...
evening - evening, originally uploaded by Maung Maung aka Mexx.
မဟာရာဇိကာရုံ၏ ပုံရိပ် - ကြာပါပြီလေ စာမရေးဖြစ်တာရော ပြီးတော့ ရုပ်ရှင် ဗွီဒီယိုတွေမကြည့်ဖြစ်တာရောပေါ့၊ မဖတ်ရမနေနိုင်တဲ့ ၀ါသနာစရိုက် ကြောင့်တော့ စာတွေတော့ဖတ်ဖြစ်တယ် စာအုပ်ဆိုင်လးတွေသ...
Mg Thu Yein's Blog
http://www.akyinnarnantaw.co.cc/2011/06/blog-post_5585.html - သိကောင်းစရာ ဆော်ဝဲလ် များ
အခွင့်အရေးသမားတွေဖြစ်နေတာ ရှက်တတ်စမ်းပါ - ‘ပြည်ထောင်စုအရေးနှင့် အတွေးအမြင်များ’ အမည်ရှိစာအုပ် ထုတ်ဝေတယ်ဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားပြီး သွားကြည့်လိုက်တယ်။ ထုံးဆန်အတိုင်းပဲ သူတို့ပြည်နယ် သူတို့လူမျိုးစုအတွ...
Speedy ENV 001 - Speedy inspired by Feng Zhu. :)
စလုံးရောက်ပထမနေ့ - ဘလော့ကလဲ ပစ်ထားတာကြာပေါ့ စာတွေတော့ရေးချင်တယ် အကြောင်း အမျိုးမျိုးနဲ့ အချိန်တွေမရလို့ မရေးဖြစ်တာနဲ့ အခု မှဘဲပြန်ရေးနိုင်တဲ့ အဖြစ် ။ပြန်ရေးတော့လဲ ကျနော့်ဘ၀ရဲ...
ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သော အမေရိကားရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီလိုလားသူများ - ပိုမို၍ဖတ်ချင်ပါသဖြင့်
ချစ်သူသို့ - သံချေးတစ်ထပ် ရွှံတစ်ထပ်မို့ သူတို့ရဲ့ စိတ်အတင်အချက်ို မင်း ဘယ်လိုမှ ဖတ်လို့ ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ အာငွေ့မှုတ်သံတွေ ကြားမှာပဲ ရယ်ကာမောကာ တစ်နွေလုံးပိတ် ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှု...
Playing with gun - Hi everybody, Long time no see and I really sry for lacking my blog so long (a year). Coz you know what , my friends and Itried to make the cartoon site 96...
ထိုင်းများ မြန်မာ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ခွင့် ယာယီပိတ် - တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော် (DKBA) က ထိုင်းနိုင်ငံသား တဦးကို ယမန်နေ့က ပြန်ပေးသဘောမျိုး ဖမ်းဆီးထားပြီးနောက် ထိုင်းအာဏာပိုင်များက ၎င်းတို့၏ နို...
အတိတ်စိမ်း - အတိတ်စိမ်း ရင်ခုန်သံတွေကို ထုဆစ်လို့မရဘူး အရိုးတွန်သံတွေဟာ သင်တို့အား နာပျော်ဖွယ်တေးသွားတပုဒ် ဖျော်ဖြေနေတာမဟုတ် တော်လှန်ဖို့အသင်အနေအထား သတိပေးအချက်ပြနေတာ သမ...
Thz - ကျနော့်အတွက်အမှတ်တရများစွာထဲ က ဒီနေ့ ၂၂.၀၈.၂၀၁၀ ဟာ လည်း အမြဲတမ်း ရှိနေမှာပါ...။ အဲ့ဒီ့အတွက် အခုပို့စ်လေး ကိုတင်ဖြစ်တယ်.
လှူကြပါဦးဗျိုး - အလှူဒါနပြုလုပ်လိုတဲ့ချစ်သောမိတ်ဆွေများကို တကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာလေးတစ်ခုအကြောင်းမျှဝေ ပေးချင်ပါတယ်။တတ်နိုင်ရင်မြန်မာပြည်အရပ်ရပ်မှာခုလိုပဲလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေရှိ...
ပြောင်းလဲခြင်း - အရာအားလုံးဟာ အချိန်ရွေ့ရှားလာတဲ့အမျှ ပြောင်းလဲလာပါတယ်....ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ အရာတွေ ဖြစ်ခဲ့တာလည်းရှိသလို..မဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေ ဖြစ်နေတာလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်...မမျော...
: : : Nay Lynn ~ နေလင်းဘလော့ဂ် မှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါ၏ ။ : : :
朋友您好 ! - 朋友您好，為了你好，請您坐好，用心聽好。 錢多錢少，夠吃就好。人醜人美，順眼就好。 人老人少，健康就好。家窮家富，和氣就好。 老公晚歸，有回就好。老婆嘮叨，顧家就好。 孩子從小，就要教好。 博士也好，賣菜也好，長大以後，乖乖就好。 房屋大小，能住就好。名不名牌，能穿就好。 兩輪四輪，能駕就好。老闆...
အတိတ်ကသင်္ကြန် (၂) - ဒီလိုနှင့်.. ကျမတို့ ခရီးသွားကားကြီးလည်း ရန်ကုန်မှ စတင်ထွက်ခွာလာပြီ..။ စထွက်ကတည်းက သင်္ကြန်သီချင်းခွေတွေ တစ်ခွေပြီး တစ်ခွေ ဖွင့်လာလိုက်တာ.. ထမင်းစားရပ်ပြီး.....
မရှိစကားမကြားရဆုတောင်းဂါထာတော်ကြီး - ၁။ သိရသိံ္မဗုဒ္ဓသေဌော ၂။ သာရိပုတ္တောစဒက္ခိဏေ ၃။ ၀ါမအံသေမောဂ္ဂလ္လာနော ၄။ ပုရတောပိဋ္ဋိကတ္တယံ ၅။ ပစ္ဆိမေမမအာနန္ဒော ၆။ စတုဒ္ဒိသာခီဏသ၀ါ ၇။ သမန္တာလောကပါလာစ ၈။ ဣန္ဒာဒေ၀ါသဗြာဟ္မက...
- "I made the right choice" I left my home and my friends, I left whom I loved, To be successful in life, People said I made the right choice. I lost my fri...
မြင်ကွင်းများ - မြင်ကွင်း(၁) ရောင်စုံယာဉ်တန်းတွေနဲ့ ထည်ဝါဆောက်ဦးတွေကြား ၀ဲယာဥဒဟို သစ်လွင်စိမ်းစို မျှော်လင့်အပြည့် ခရီးနှင်သူတွေ............... မြင်ကွင်း(၂) ရောင်မှိန်ယာဥ...
8.8.8.8 - 8.8.8.8 or 8.8.4.4 ? Google ကနေ့ အလကားပေးနေတဲ့ Google Public DNS server address ပါ။ DNS ဆိုတာ အလွယ်ပြောရရင် စာလုံးတွေနဲ့ ဖေါ်ပြတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက် လိပ်စာတွေကို I...
မြန်မာ့ရေးရာသတင်းလွှာများ(၂၂-၁၀-၂၀၀၉) - မြန်မာဝက်သားသည်များ တရုတ်ဈေးအတွင်း ၀င်ခွင့်မရခဲ့ (သျှမ်းသံတော်ဆင့်) အမေရိကန်ရဲ့ မြန်မာမူဝါဒသစ် လွှတ်တော်အမတ်တွေ စောင့်ကြည့်သွားမည် (VOA) အီရန် နျူကလီးယား ပြဿ...
ကျွန်တော်တို့ ကရင်လူမျိုးတိုင်း နားထောင်သင့်တဲ့ သီချင်းလေး တပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ -
To www.TGRmg.Net - ဘလော့ဂ်ထဲမှာပါ ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက် ဖြစ်နေမယ်ထင်တယ် :P စာမေးပွဲနီးကတည်းက ပျောက်သွားလိုက်တာ စာမေးပွဲပီးလို့ ပြန်ရေးစမှာပဲ အရင်ဝယ်ထားတဲ့ host & domain က ရက်ကု...
ဖိတ်ကြားလွှာ - လာရောက် လည်ပတ်သူမိတ်ဆွေ များကို မင်္ဂလာပါ လို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အခုလက်ရှိ blog spot ကနေပြီး mmbettertomorrow.com ကိုပြောင်းလည်း ရေးမှာဖြစ်တဲ့ အတွ...
မလေးမေ ရဲ့ အိပ်မက်များ
မျှော်လင့်ချက် နဲ့ ရင်းနှီးခြင်း …….. - မျှော်လင့်ချက် နဲ့ ရင်းခြင်း …….. ထီထိုးဖို့ ဝါသနာမပါတဲ့ ကျွန်တော့် ခေါင်းစဉ် ကြည့်ပြီး ကျွန်တော့် ချစ်သူကတော့ပြုံးမှာပဲ .. ( ၁ ) ကျွန်တော် တလ တခါ .. တ...
- မတ်လ၏ နွေညများ “ဟယ်” ခရီးရောက်မဆိုက် ဒေါ်လေးရဲ့ ရှည်လျားလှတဲ့ အံ့အားတသင့် အာမေဋိတ်သံက ဆီးကြိုလိုက်တဲ့အပြင် ဘေးမှာရှိနေတဲ့ မေမေရဲ့ ကွက်ခနဲပျက်သွားတဲ့ မျက်နှ...
ကျောင်းအပ်ချိန် - ရင်ဝယ်ချမ်းမြ သမီးလှနှင့် သားလှရတနာ မေ့သည်းချာကို ပညာအမွေ ပေးနိုင်စေဖို့ လာလေသွားစို့ ကျောင်းအပ်ဖို့လျှင် ကြိုလို့ပြင်ဆင် ပျော်ပျော်ရွှင်ပေါ့ ရင်ကော့ခေါင်းမော...
NYI YE KHAUNG
လေးဖြူ BOB ဝိရောဓိ MTV Creation -
Memorries - ကျွန်တော် ၁၀ တန်းတုန်းက ကျွန်တော့်အိမ်မှာ ကျူရှင်ဝိုင်းခေါ်ပါတယ်။ ယောက်ကျားလေး ချည်းပါပဲ။ အားလုံးပေါင်း ၆ယောက်ပါ။ အဲ မျောက်လောင်းကျော်တွေပေါ့ဗျာ။ အိမ်ကထွက်ေ...
Conan The Barbarian (1982) - *Plot Summary* A village is attacked by the evil ruler of the Snake Cult, Thulsa Doom and his evil warriors, when Thulsa Doom and his warriors k...
Sorry seems to be the hardest word - this is the song my friend recently recommend me and i fall in love at the fast time i listen to it.I posted the lyric here.. Sorry Seems To Be The Hardes...
ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက် - ဖူး.. ဖူး… ဘုန်း.. ဘုန်း.. ဘုန်း… ဘလော့ကို ဖုန်ခါလိုက်တာခင်ဗျ။ မှိုတက်နေတဲ့ ဒီဂျင်းဘောင်းဘီကို OSO နဲ့လျှော်မှ ရတော့ မယ်ထင်တယ်။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ… ကျွန်တော်တို...
ရွှေမြို့တော် - လိုင်းကားကကြပ် ၊ ချွေးကထွက်နှင့် နေခက်လှသည်၊ မြန်ရွှေပြည်၏ လူစည်မြို့တော်၊ နေရာကျော်ကို မှည့်ခေါ်ကြသည်၊ ရန်ကုန်မည်၏။ ထိုထိုကားများ၊ ကြပ်သလားဆို သင်သွားကြည့်ပါ...
Corpse Bride အားနှစ်သိမ့်ခြင်း - *ချစ်သူရေ…………………* ဒေသနာတရားတော်တွေ သံမှိုနှက်ထားတဲ့ ဟန်ဆောင်မျက်ရည်က တစ်ဖက် ငရဲရဲ့ကောင်းကင်လို ပူလောင်စူးရှနေတဲ့ မနာလိုစွပ်စွဲမှုတွေက တစ်ဖက်နဲ့ အသုဘရှုသူတွေရဲ...
Is there tyranny in Myanmar? - ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှာကျင့်သုံးနေကြတဲ့ အုပ်ချုပ်မှုစံနစ်များကို နှိုင်းယှဉ်မှုကြရာမှာ ပြသနာတက်ကြတဲ့အရာတစ်ခုက အုပ်ချုပ်မှုစံနစ်တစ်ခုကို တိတိကျကျနဲ့ အဓိပ္ပာယ်သတ်မ...
နှစ်သစ်ဆုတောင်း - ကိုလျှာရှည်လိုဘဲ လူမော်လဲ သက်ပြင်းတစ်ချက်ဆွဲသွင်းလိုက်သည်။ ပြီးတော့ သက်ပြင်းတစ်ချက်ဘဲ ပြန်မှုတ်ထုတ်သည်။နှစ်တစ်နှစ်သည် လူမော့်မျက်စိအောင်တွင်ပင် ကိန်းဂဏန်းတ...
သခင်အောင်ဆန်းတဲ့ဟေ့ .......... -
ဖြန့် ကျတ်ထားသော ကျွန်တော်၏ ၀ိဥာဉ်များ....
အတိတ်အလွဲများသို့ .. - ချိတ်ဆွဲထားတဲ့အတိတ်မွဲလေးကို.. မအိပ်ပဲထားပြီးစိတ်ဆွဲနေလိ သိပ်သည်းနေတဲ့အရိပ်မဲတွေကို.. မှိတ်မြဲထားမလို့ လေ...
ကိုယ့်ကိုယ်ကို မုန်းတဲ့အချက်(၁၀)ချက်.. - ၁။*အားနာတတ်တာ* ဟုတ်တယ်..ကျွန်မမှာလူတွေကိုအားအရမ်းနာတတ်တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်...တခါတလေ......ကိုယ့်အတွက်အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေပေမဲ့တစ်ဖက်သားအပေါ်ကိုယ့်...
ဗုဒ္ဓဂါယာခရီးစဉ်(၃) - ဒီခရီးစဉ် အကြောင်းမရေးတာတော်တော် ကြာနေလို့ စာဖတ်သူသူငယ်ချင်းများလည်း စိတ်မရှည်မှာပါဘဲ။ ကိုယ်အကြောင်း နဲ့ကိုယ်မို့ ခွှင့်လွှတ်ကြပါလို့ တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ အ...
ဘလော့မှခဏအနားယူခြင်း - ကျတော်သည် ဘလော့လောကမှခေတ္တခဏအနားယူလိုက်ပါသည် အားလုံး ကိုယ့်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေသား
ကပ်နိုင်ရင် ကားတစ်စီးရမယ့် Subaru Impreza Challenge 2008 - လုပ်ရမှာက လွယ်လွယ်လေးပါ။ ရပ်ထားတဲ့ အသစ်စက်စက် Subaru အမျိုးအစား ကားတစ်စီးကို လက်ဝါးကလေးနဲ့ ကပ်ထားရုံလေးပါ။ အကြာဆုံးကပ်နိုင်ရင် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၈ သောင်းတန်တဲ့ ...
- "လမ်းခူးလက်" နံဂါးခံတွင်းဝက လေပြေညင်းတွေကို ရင်မထိအောင် ရှိုက်သွင်း ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဖောက်ဖို့ လမ်းပျောက်နေခဲ့တယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မေးကြည့်တော့လည်း အသံတွေက ...
3D Pianist - *သုံးဖက်မြင် စန္ဒယားဆရာ* “အိုကေ၊ ရွေးချယ်ခံရတယ်ဆိုရင် ဒီဖုန်းနံပါတ်ကို ဆက်သွယ်လိုက်မယ်။ ဟုတ်ပြီလား” နောက်ဆုံး အင်တာဗျူးဝင်လာသူ ကောင်လေးက ခေါင်းငြိမ့်ပြပြီ...
Aung Pin Lea
Google Android ဖုန်းတွေလာတော့မည် - Google Inc ရဲ့ Androl မို ဘိုင်း operating software ကိုသုံးစွဲမည့်ပထမဆုံး မိုဘိုင်းဖုန်း ကို ၁၉၉ဒေါ်လာနဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင် တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖုန်းကိုတရုပ်(တု...
ဇီးကွက်အကြောင်း - သွားခါနီး ဆိုတော့ စာရေးရမှာ လည်း စိတ်လုံးဝမပါဘူး။ ကော်နက်ချဉ် မကောင်းတာလည်း ပါသပေါ့လေ။ (အမှန်ကတော့ ပျင်းတာပါ ;P ) ။ အခုတော့ တက်ဂ်တာတောင်မှ နှစ်ခါပြိုင် တက်...
“စိတ်၏စေရာ” - ဒီတစ်ခါတော့. ညစ်နေတဲ့ စိတ်တွေ. ဒေါသထွက်နေတဲ့ ခံစားမှူတွေ ခဏတာ ပြေပျောက်ရလေအောင် ပေါ့ဗျာ. ကိုယ်မကျေနပ်တဲ့ “ Web ” တွေ အထူးသဖြင့် “ Blog” တွေပေါ့ဗျာ ရှိကြမှာပါ...
ကျဆုံးလေပြီးသော ရဲဘော်သို့ - သနစ်မှိုင်းမြ၊ ကမ္ဘာကလျှင် လွင်မြသံရှည်၊ ပျံဝေ့လည်၍ ကျူးမြည်ထံတျာ၊ စစ်ခရာသည် သံဝါငြိမ့်လေး၊ သည်းလှိုက်အေးစွ နယ်ကျေးရွာရပ်၊ ပဲ့တင်ထပ်ခဲ့ ဤကပ်လွှာမြေ၊ လွမ်းတေးစေသေ...
- -------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------...
Moe Nya Lay
- အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း မျှော်လင့်မထားပဲ ဆုံတွေ့ခဲ့ရ ဆန်ကြယ်လှတဲ့ တွေ့ဆုံမှု သံယောဇဉ်တွေ တယောက်နဲ့တယောက် အတူတူရှိပါလျှက်နဲ့ ဝေးကွားခဲ့ပြန်ပြီပေါ့နော် ...
我们 还有 很多 梦 没做 ...
စာရေးဆရာမ မစန္ဒာ ၏ ၀တ္ထုတို/၀တ္ထုရှည်များ - စာရေးဆရာမ မစန္ဒာ ၏ ၀တ္ထုတို/၀တ္ထုရှည်များ ( E-Books Collection ) & Sharing မစန္ဒာ - ၀တ္ထုတိုများ (၂) ( http://www.mediafire.com/?cdn93dmsi2v ) မစန္ဒာ - ၀တ္ထုတို...
“မပြောင်းလဲဘူး” - တစ်ကြိမ်တစ်ခါက အကြိမ်တစ်ရာမက ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ စကားလုံးတွေ သတိတရ နဲ့ တမ်း တစ်တတ ပါပဲ။ အားလုံးကိုကျောခိုင်း ထင်ရာစိုင်းပြီး လောက ဇာတ်ခုံပေါ် လင်းတစ်လှည့် မှိန်တစ်...
Post title နောက်မှာ ပုံလေးတွေ ထည့်ကြမယ်… - Post title နောက်မှာ ပုံလေးတွေ ထည့်ကြမယ်... ကျတော် အခု အနည်းငယ် ပြင်ထားတဲ့ template design မှာ Post title ရဲ့ နောက်မှာ နောက်ခံပုံ ကနုတ်လေးထည့်ထားပါတယ်… အဲဒ...
သူကြီးဘစီ နှင့် ရွာသားများ
ဒုတိယပိုင်း - အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း သူငယ်ချင်းတွေကို လိုက်နုတ်ဆက်ရတော့တာပေါ့ တစ်အိမ်ဝင်တစ်အိမ် ထွက်နဲ့ လိုက်နုတ်ဆက်လိုက်တာ လူစုံသလောက်တော့ရှိသွားတယ် နောက်ဆုံး တစ်ယောက်ကျ...
- [image: click to comment]
USS Essex ဦးဆောင်တဲ့ ကမ်းတက်ချေမှုန်းရေးအသင့်ရေယာဉ်စု မြန်မာ့ရေပြင် အနီးဆက်ရှိနေတာဘာသဘောလည်း... - Nagis ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီဖို့ Relief Materials တွေသယ်လာတယ် ဆိုပြီး Bay of Bengal ထဲမှာ အမေရိကန်ရေတပ်က USS Essex သဘောင်္အမှတ်(LHD-2)ဦးဆောင်တဲ့ ကမ်းတက်ချေမှုန်း...
Changing Address - ကျွန်တော့်ဘလော့ကို လိပ်စာပြောင်းလိုက်ပါပြီ..။ အခြေအနေ အမျိုးမျိုးကြောင့် blogspot ကို ၀င်ရ ရေးရတာ ခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ..။ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရရင် ခွင့်လွှတ...
Useful 100 keyboard shortcuts - ဂျင်းဂျက်ကတ်လေး ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေ အထိုက်အလျောက် အသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိတဲ့အတွက်ပါ ... အသုံးဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း ဝေမျှစေချင်ပါတယ် ။ *CTRL+C *(Copy)...
Problem with wordpress.com - wordpress.com ကို မြန်မာတွေအသုံးပြု ရာမှာ အဓိက ပြသနာ က CSS ကုတ်ဒင်းတွေကို ၀င်ပြင်လို့ မရချင်းပါပဲ။ ကိုယ်ပိုင် web host မှာ တင်သုံးမှသာ စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်လိ...
သပွတ်အူထဲသို့ ၀င်ကြည့်ခြင်း - မီသော်ကြီးတစ်ရောက်လည်း ထိုသို့နှယ် ဤသို့နှယ် ပျောက်ကွယ်လုဖြစ်နေပါပြီ။ ဘလော့အနားလည်း မကပ်နိုင်၊ စွဲလမ်းလာခဲ့သမျှ ချက်တင်လည်း မ၀င်ဖြစ်။ ဒါဟာ ဘယ်သူ့ကြောင့်လည...
အပျင်းပြေ - ကျနော် ဒီလမ်းထိပ်လေးမှာ မြွေအလိမ္ပါယ် လာပြနေတာ တစ်ပါတ်တောင်ရှိပြီ။ ဒီလမ်းက `သူ´ ဈေးသွားနေကျ လမ်းလေ။ သူက မြွေအလိမ္ပါယ် ၀ါသနာပါပုံရတယ်။ အစကတော့ ဖြတ်သွားတုန်း...
blog blog blog - ကြိုးစားနေတဲ့ Blog လေးတွေပါ.. ကြည်ရူအားပေးကြပါအုန်း...့ hohodidi.blogspot.com အိုင်ဒီယာလေးတွေရှိတဲ့လူလေးတွေပါ...အားပေးလိုက်ကြပါအုန်း pyawpyawparpar.blogspot....
ရန်ကုန်မှာ ပိတ်မိနေတဲ့ ကျနော် - ကျနော် အခုတလော ရန်ကုန်မှာ ပျင်းနေတယ်.. ဘယ်သူ့ကိုမှ မကူညီနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာ ပေကပ်မနေချင်ဘူး.. ခရီးသွားလည်း ခဏဘဲ ပျော်ရွှင်စေတယ်.. စင်ကာပူကို စာသွားဖတ်ချင်ေ...
mg myo min ( ခံစားမိသမျှ )
ုရ လား မသိ - ရ လား မသိဘူး ၊ စိတ်ညစ်လာပြီ။ ရ လား မသိဘူး ၊ စိတ်ညစ်လာပြီ။ ရ လား မသိဘူး ၊ စိတ်ညစ်လာပြီ။
~~~Where my ideas had been shared~~
Famous Lovers - # Napoleon & Josephine # Romeo & Juliet # Elizabeth Taylor & Richard Burton # Bonnie & Clyde # Antony & Cleopatra # Hugh Grant & Liz Hurley # Tom Cruis...
All Together on A Planet ...
မင်္ဂလာပါ မေမေ နေကောင်းပါလားခင်ဗျာ
ကြာပန်းဖြု - Powered by CO.CC
Gu Gu's Cyber Sandbox
honey's private thought
tHIs iS kOyE's wEbLoG
၇၇ သား ကင်ဆာဖွား
Kholun - ခေါဟ်လံင်ဖါသိုင့် အင်းဟှးလင်
Karaweik Ei Tay-Than-Cho ကရဝိတ်၏ တေးသံချို 妙声鸟的和鸣
ချစ်ဦး ( ဓါတ်ပုံ ) မှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
Burma Campaign Japan , BCJPTelevision
မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် နှင့် နက္ခတ် - Myanmar Astrology
ကျွန်တော်၏ခံစားဖြစ်တည်ရာ - Powered by CO.CC
My P0eM bAg
myanmar actress hot models videos at myanmarbloggers.org
ငှက်ငယ်လေး ရဲ့အိမ်
Welcome to the Mizzima News - Burmese Version
ကဗျာတစ်ဝက် စာတစ်ဝက်နဲ့အမြဲတမ်းကြိုဆိုနေပါတယ်......
dev videos - Innwa Myanmar Videos - Myanmar music videos, movie clips, karaoke, myanmar music and MP3
downloadable smiley kredit robert boese at boesein.com
My heart, my thought, my life.......
Burmese Version / Kaowao Newsgroup
ကျွန်မ နှင့် တွေ့သမျှ ၊ မြင်သမျှ ၊ ခံစားလို့ ရသမျှ. . . . . . .
CLICK TO SEE BURMESE FONT